Natvisa.com | Faka isicelo se-Visa yakho kwi-Intanethi
Amava esicelo esitsha kunye nesiPhuculweyo seVisa
Wamkelekile kumava amatsha okuhamba. Indlela yekamva ikwi-intanethi kwaye oorhulumente abaninzi baya kwiqonga elikwi-intanethi elungiselelwe izicelo zokuhamba. Kungenxa yeso sizathu le nto iNatvisa ilungelelanisa kwaye iphucula amava okufaka isicelo se-visa. Akusekho nto ukujongana neewebhusayithi zikarhulumente ezibuggy okanye ezenzakeleyo rhoqo. Iiseva zethu zigcinwa kwindawo ekhuselekileyo ekhusela idatha yomsebenzisi. Khohlwa ukukhangela imigaqo-nkqubo yee-visa, kunye neemfuno zokungena kwiwebhu iphela. Siqokelele lonke ulwazi oluchanekileyo nge-visa ngohambo lwakho oluzayo, apha kwiAntvisa.com. Abasebenzi bethu beenkxaso bayazi apha ukuba bakuncede nakweyiphi na imibuzo onokuba unayo. Ukulungele ukuhamba? Qalisa namhlanje!
Ukusetyenziswa ngokulula kwe-Intanethi
ENatvisa, siyaqinisekisa ukukunikezela ngamava okusebenza kwesicelo esingenaxhala se-visa. Sebenzisa iwebhusayithi yethu esebenziseka lula, ungasifaka ngokukhawuleza isicelo sakho ngokulandela amanyathelo alula.
Isicelo ngasinye esidlula kwiNatvisa, siphononongwa ngokugqibeleleyo ziingcali. Iqela lethu liqinisekisa ukuba zonke iimfuno ziyafezekiswa ngaphambi kokuba zidlulise iifom zakho zikarhulumente.
Ikhuselekile kwaye inokuthenjwa iwebhusayithi
E-Natvisa, ukhuseleko lolwazi lwabathengi bethu lubaluleke kakhulu. Kungenxa yoko le nto iakhawunti yakho kunye nolwazi lomsebenzisi lugcinwa phezulu kumaziko edatha esetyenziselwa ubuchwephesha bokugcina kunye netekhnoloji.
Eyona nkxaso yabathengi ababalaseleyo
Siyaqonda ukuba yonke inkqubo yokusetyenzwa kwesicelo sakho se-Visa ingaba nzima. Kungenxa yoko le nto iqela lethu elixhasayo lenkxaso yabathengi likho 24/7 ukuze uphendule yonke imibuzo nezicelo zakho.
Iindidi zeVisa Inyathelo ngenyathelo
I-Visa ye-elektroniki (eVisa)
Natvisa.com iwebhusayithi yezorhwebo eqhuba isicelo sevisa ngaphandle kwehlabathi. UNatvisa uya kuhlawulisa umrhumo wenkonzo ngomenzi-sicelo ngamnye ngamava asemgangathweni esicelo se-Intanethi; ukongeza kwimirhumo kaRhulumente, eya kwahluka ngokuxhomekeka kwilizwe oya kulo. Sinikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali esiyi-100% ukuba amava awanelisi.